Showing posts sorted by relevance for query dvb. Sort by date Show all posts
ခြံပိုင်ဆိုင်ခွင့်အတွက် သက်သေနှင့် မှတ်တမ်းအတုများ အသုံးပြု၍ တရားစီရင်ရေးစနစ်အတွင်းလုပ်ဆောင်ပုံ အကြောင်းအရာများကို DVB က မှတ်တမ်းရုပ်ရှင် ရိုက်ကူးမှုအား ရှင်းလင်း
5/09/2014 10:22:00 PM crime-news Myanmar-news
ဘိန်းဘုရင်အဖြစ် နာမည်ကျော်ခဲ့သူ လော်စစ်ဟန်၏ တူတော်စပ်သူဟုဆိုသည့် လီယွန်းကျင်ဆိုသူ ၀ယ်ယူခဲ့သည့် ကျပ်သိန်း တစ်သောင်းကျော်တန်ဖိုးရှိသည့် လှည်းကူးမြို့နယ်၊
ကျွန်းကလေးကျေးရွာရှိ ခြံကွက် နှစ်ကွက်အား ဒေါ်လျောင်ငုတ်လင်(ခ) ဒေါ်စန်းစန်းရီဆိုသူက သက်သေနှင့် အထောက်အထားအတုများကို အသုံးပြု၍ ပိုင်ဆိုင်မှုရရန် လုပ်ဆောင်သည့်အကြောင်းအရာများကို ရိုက်ကူးထားသည့် “တရားမကြီး အမှုအမှတ် ၄၁၆ နှင့် ၄၁၇” စုံစမ်းထုတ်ဖော် ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းအကြောင်း သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအား မေ ၈ ရက်က တာမွေမြို့နယ် နှင်းဆီလမ်းရှိ မြန်မာနိုင်ငံအခြေစိုက် DVB သတင်းဌာန ရုံးခန်းတွင် ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ မှတ်တမ်းအား ရိုက်ကူးနိုင်ရန် DVB သတင်းဌာနက လေးလကျော် အချိန်ယူ ရိုက်ကူးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ DVB သတင်းဌာနက ရိုက်ကူးထားသည့် မှတ်တမ်းတွင် လီယွန်းကျင်ဆိုသူသည် ကိုးကန့် တရုတ်လူမျိုးတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ကိုးကန့်နယ်မြေအတွင်း အကြီးဆုံးဘိန်းချက် စက်ရုံအား တည်ဆောက်ခဲ့သူဖြစ်ကြောင်း စသည့်အချက်များအား လီယွန်းကျင်က ခန့်အပ်ခဲ့သည့် ခြံစောင့် ဦးဝင်းထွန်းနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့သည်များကို ရိုက်ကူးတင်ပြထားသည်။
လီယွန်းကျင်က ခြံနှစ်ခြံအား အခြားသူ၏ မှတ်ပုံတင်ဖြင့် ၀ယ်ယူခဲ့ကြောင်း အထောက်အထားများအပါအ၀င် DVB သတင်းဌာန၏ စုံစမ်းဖော်ထုတ်မှုအရ လီယွန်းကျင်ဆိုသူသည် လော်စစ်ဟန်၏ ကိုးကန့် လက်နက်ကိုင်တပ် ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း အထူးဒေသ၏ ဦးစီးကော်မတီဝင် ဖြစ်ကြောင်း ကိုးကန့်နှင့် အစိုးရအကြား ငြိမ်းချမ်းရေးရယူထားစဉ် မှတ်ပုံတင်အတုဖြင့် ရန်ကုန်မြို့သို့ လာရောက်၍ ၁၉၉၇ ခုနှစ်က အဆိုပါ ၅ ဧကကျော်ရှိ ယင်းခြံကွက် နှစ်ကွက်အား ၀ယ်ယူခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ အစိုးရနှင့် ကိုးကန့်အကြား ၂၀၀၈-၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင်း ပြန်လည်ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် တိုက်ပွဲအတွင်း ကျဆုံးခဲ့ဟန်ရှိကြောင်း စသည့်အချက်အလက်များအား ရိုက်ကူးတင်ပြထားသည်။
အဆိုပါ ခြံနှစ်ခြံအား အမည်ပြောင်းရန် နှင့် ခြံစောင့် ဦးဝင်းထွန်းအား ထွက်သွားပေးရန် ဒေါ်လျောင်ငုတ်လင် (ခ)ဒေါ်စန်းစန်းရီက တရားစွဲဆိုခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ DVB သတင်းဌာနက ဒေါ်လျောင်ငုတ်လင်အား တွေ့ ဆုံကာ ဒေါ်လျောင်ငုတ်လင် တင်ပြသည့် အချက်များဖြစ်သည့် လီယွန်းကျင်နှင့် လက်ထပ်ပေါင်းသင်းခဲ့သည့် လက်ထပ်ကျမ်းကျိန်လွှာ၊ သေစာရင်း၊ ၁၉၇၈ ခုနှစ်တွင် လက်ထပ်ခဲ့သည်ဆိုသည့် ဖိတ်စာ၊ ယှဉ်တွဲရိုက်ထားသည့် ဓာတ်ပုံများ စသည့် အချက်အလက်များ မှန်ကန်မှုရှိ မရှိအား DVB သတင်းဌာနက စုံစမ်းဖော်ထုတ်ရာတွင် ဒေါ်လျောင်ငုတ်လင် (ခ)ဒေါ်စန်းစန်းရီသည် အိမ်ထောင်မရှိသူ အပျိုကြီးတစ်ဦး ဖြစ်ကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရသည်ဟု ရိုက်ကူးဖော်ပြထားသည်။
DVB သတင်းဌာနက သေစာရင်း ထုတ်ပေးခဲ့သည့် စင်ကာပူနိုင်ငံရှိ ဆေးရုံ နှင့် စင်ကာပူနိုင်ငံလိပ်စာပါ လူနာနေအိမ်သို့ သွားရောက်မေးမြန်းရာ ဒေါ်လျောင်ငုတ်လင်(ခ)ဒေါ်စန်းစန်းရီ တင်ပြသည့် သေစာရင်းမှာ လွဲမှားနေသည့် အချက်အလက်များစွာ ပါဝင်နေကြောင်း ရိုက်ကူးတင်ပြထားသည်။
ဒေါ်လျောင်ငုတ်လင် (ခ)ဒေါ်စန်းစန်းရီ တင်ပြသည့် အချက်အလက်များမှာ မှတ်တမ်းအတုများသာဖြစ်ကြောင်း လီယွန်းကျင် ခြံဝယ်ယူရန် လာရောက်စဉ်က ဒေါ်လျောင်ငုတ်လင် (ခ)ဒေါ်စန်းစန်းရီမှာ စကားပြန်အဖြစ်သာ ပါဝင်ခဲ့ကြောင်း ပြောဆိုသည့် ကျွန်းကလေးကျေးရွာမှ တာဝန်ရှိသူ အပါအ၀င် ဒေါ်လျောင်ငုတ်လင်နှင့် သူမ၏ရှေ့နေများ၊ နေရာဌာနများစွာသို့ သွားရောက်တွေ့ဆုံ မေးမြန်းခဲ့သည်များကိုလည်း ရိုက်ကူးတင်ပြထားကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါအမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် အောက်တိုဘာလတွင် တစ်ဖက်သတ် စီရင်ချက်အမိန့်ချမှတ်ခဲ့သည့် တရားသူကြီး ဒေါ်လေးလေးမွန်သည် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး တရားလွှတ်တော်တရားသူကြီး ဖြစ်နေကြောင်းနှင့် တရားလိုဘက်က တင်ပြထားသည့် သက်သေအထောက်အထားများနှင့် မှတ်တမ်းအတုများအပေါ် အခြေခံကာ တရားလိုကို တစ်ဖက်သတ် အနိုင်ဒီဂရီချပေးခဲ့ကြောင်း၊ သက်သေ အထောက်အထားများ မှန်ကန်မှုရှိ မရှိကို အလွယ်တကူလုပ်နိုင်သည့် စိစစ်မှုမျိုး လုပ်ရန်ကိုပင် တရားရုံးက ပျက်ကွက်ခဲ့ကြောင်း၊ အမှုစစ်ဆေးနေစဉ်ကာလအတွင်း တရားလိုတင်ပြသော အချက်အလက်များကို တန်ပြန်ချေပသူ မရှိဘဲဖြစ်ခဲ့ရကြောင်း DVB နှင့်သီးသန့် တွေ့ဆုံစဉ် ပြောကြားခဲ့ကြောင်းတို့ကို DVB သတင်းဌာနက သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ထို့ပြင် တရားသူကြီး ဒေါ်လေးလေးမွန် နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်များကိုလည်း မှတ်တမ်း ဗီဒီယိုတွင် ဖော်ပြထားသည်။
DVB သတင်းဌာနအနေဖြင့် အဆိုပါအမှုအား ဖော်ထုတ်ရာတွင် တာဝန်ရှိသူအသီးသီးက ဖြေဆိုရန် ငြင်းပယ်ခြင်းများ ကြုံ တွေ့ခဲ့ရသည့်အတွက် မှတ်တမ်းဗီဒီယိုအား ခိုးပြီးရိုက်ကူးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ရကြောင်း အများပြည်သူအကျိုးအတွက် အဆိုပါမတရားမှုအား ဖော်ထုတ်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်းနှင့် ယခုဖော်ထုတ်သည့် အမှုတွဲမှာ တရားရုံးက အနိုင်ဒီဂရီ ချမှတ်ပြီးသည့် တရားစွဲမှုနှစ်ခုဖြစ်သော ၄၁၆ နှင့် ၄၁၇ ကိုသာ ဝေဖန်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ယခုအမှုမှာလည်း ပြီးပြတ်ခြင်းမရှိသေးဘဲ တရားမကြီးအမှု အမှတ် ၁၇ ဖြင့် ဆက်လက်ရင်ဆိုင်နေဆဲဖြစ်ကြောင်း စသည့်အချက်များအား မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးသူ ဒါရိုက်တာ ဦးခင်မောင်ဝင်းက ဆိုသည်။
ယခုကဲ့သို့ တရားစီရင်ရေးစနစ်၏ လွဲမှားချွတ်ချော်မှုအား ထောက်ပြရခြင်းမှာ DVB သတင်းဌာန၏ မကွေးသတင်းထောက် ကိုဇော်ဖေ ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံရခြင်းနှင့် မသက်ဆိုင်ကြောင်း ကိုဇော်ဖေ၏အမှုမှာ လွန်ခဲ့သည့် နှစ်နှစ်ကျော်က တရားစွဲဆိုခံရခြင်းဖြစ်ပြီး ယခုခြံနှစ်ကွက်အမှုမှာ အပြစ်မရှိဘဲ ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံရသည့် DVB သတင်းထောက် ကိုဇော်ဖေ စီရင်ချက်မချမီ ၂၀၁၃ ဒီဇင်ဘာလက စတင်စုံစမ်းဖော်ထုတ်ခဲ့ခြင်းသာဖြစ်ကြောင်း DVB သတင်းဌာနသည် Professional ပီသသည့် သတင်းဌာန တစ်ခုသာဖြစ်ကြောင်း ဦးခင်မောင်ဝင်းက ဆက်လက်ပြောကြားသည်။
ခြံစောင့်ဦးဝင်းထွန်းကလည်း အဆိုပါ ခြံကွက်နှစ်ကွက်၏ မူလပိုင်ရှင်ဖြစ်သူ လီယွန်းကျင်သည် လက်ရှိကာလအထိ သေသည်ရှင်သည်ဆိုသည့် အခြေအနေတစ်ခုခုအား သိရှိမှုမရှိကြောင်း ထိုသို့သော အခြေအနေတွင် တာဝန်ပေးအပ်ထားသည့် အလုပ်တာဝန်တစ်ခုအား ဆက်လက်ထမ်းဆောင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားသည်။
လီယွန်းကျင်သည် ဘိန်းဘုရင် လော်စစ်ဟန်၏ တူဖြစ်သူဆိုခြင်း၊ လီယွန်းကျင် ပိုင်ဆိုင်သည့် မြေကွက်နှစ်ခုအား ဒေါ်လျောင်ငုတ်လင် (ခ)ဒေါ်စန်းစန်းရီက ပိုင်ဆိုင်ရန် လုပ်ဆောင်နေခြင်းအပေါ် လော်စစ်ဟန်တို့ဘက်က တုန့်ပြန်မှုရှိ မရှိ စသည့် အချက်များအပေါ် EMG က မေးမြန်းရာတွင် လီယွန်းကျင်သည် လော်စစ်ဟန်၏ တူဖြစ်ကြောင်း ခိုင်မာသည့် အထောက်အထားများ၊ ယုံကြည်ရသည့် အထောက်အထားများ ရှိသည့်အတွက် DVB က ဖော်ပြခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ဒေါ်လျောင်ငုတ်လင် (ခ)ဒေါ် စန်းစန်းရီက ခြံကွက်နှစ်ကွက်အား ပိုင်ဆိုင်ရန် လုပ်ဆောင်နေမှုအား လော်စစ်ဟန် ပြောနိုင်ခွင့်ရှိသည့် အနေအထားမဟုတ်၍ ၀င်ရောက်စွက်ဖက်မရကြောင်း ထို့ပြင် လီယွန်းကျင်က ခြံဝယ်ယူစဉ်ကလည်း မှတ်ပုံတင်အတုဖြင့် ၀ယ်ယူခဲ့ခြင်းဖြစ်နေကြောင်း ဦးခင်မောင်ဝင်းက ဆက်လက်ရှင်းလင်း ပြောကြားသည်။
ထိုသို့ ဖြစ်နေသည့် အနေအထားတစ်ခုတွင် သမ္မာန်စာဆင့်ဆိုသည့် အနေအထားများ၊ လင်မယားဖြစ်ကြောင်း ခိုင်လုံအောင် တင်ပြရန်လိုအပ်သည့် အနေအထားများ အချိန်ငါးလကျော်အတွင်း စစ်ဆေးခဲ့သည့် ၄၁၆ နှင့် ၄၁၇ အတွက် အမှန်တရားနှင့် ဝေးကွာသည့် အနေအထားတစ်ခု ဖြစ်နေကြောင်း မဏ္ဍိုင်ဥပဒေ အကယ်ဒမီမှ ဥပဒေပညာရှင် ဦးမောင်မောင်ဝင်း၏ ပြောကြားချက်များအရ သိရသည်။
(တရားလိုတင်ပြသည့် သေစာရင်းနှင့် DVB မှ ရရှိထားသည့် သေစာရင်းနှစ်ခု ကွဲလွဲနေပုံအား DVB ၏ မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်တွင် ဖော်ပြခဲ့သည်ကို တွေ့ရစဉ်)
5/09/2014 01:16:00 PM Myanmar-news
တရားလိုတင်ပြသည့် သေစာရင်းနှင့် DVB မှ ရရှိထားသည့် သေစာရင်းနှစ်ခု ကွဲလွဲနေပုံအား DVB ၏ မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်တွင် ဖော်ပြခဲ့သည်ကို တွေ့ရစဉ်
ဘိန်းဘုရင်အဖြစ် နာမည်ကျော်ခဲ့သူ လော်စစ်ဟန်၏ တူတော်စပ်သူဟုဆိုသည့် လီယွန်းကျင်ဆိုသူ ၀ယ်ယူခဲ့သည့် ကျပ်သိန်း တစ်သောင်းကျော်တန်ဖိုးရှိသည့် လှည်းကူးမြို့နယ်၊ ကျွန်းကလေးကျေးရွာရှိ ခြံကွက် နှစ်ကွက်အား ဒေါ်လျောင်ငုတ်လင်(ခ) ဒေါ်စန်းစန်းရီဆိုသူက သက်သေနှင့် အထောက်အထားအတုများကို အသုံးပြု၍ ပိုင်ဆိုင်မှုရရန် လုပ်ဆောင်သည့်အကြောင်းအရာများကို ရိုက်ကူးထားသည့် “တရားမကြီး အမှုအမှတ် ၄၁၆ နှင့် ၄၁၇” စုံစမ်းထုတ်ဖော် ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းအကြောင်း သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအား မေ ၈ ရက်က တာမွေမြို့နယ် နှင်းဆီလမ်းရှိ မြန်မာနိုင်ငံအခြေစိုက် DVB သတင်းဌာန ရုံးခန်းတွင် ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
4/07/2014 08:28:00 PM Myanmar-news political-news
မဇ္ဈိမသတင်းထောက် ကိုရေခဲအား ခွင့်ပြုမိန့်မရရှိပဲ ဆန္ဒပြခဲ့သောကြောင့် မြို့မစခန်းမှူးဦးမျိုးမြင့်က တရားစွဲ
4/26/2014 04:51:00 PM political-news
DVB သတင်းထောက်ကိုဇော်ဖေအား ပြန်လည်လွတ်ပေးရန် ပြည်မြို့တွင် ဧပြီ ၂၅ရက်က ခွင့်ပြုမိန့်မရရှိဘဲ
ဆန္ဒပြခဲ့သော မဇ္ဈိမသတင်းထောက် ကိုရေခဲအား ပနံပါတ် ၂၂၁/၁၄ ပုဒ်မ ၁၈ဖြင့် မြို့မစခန်းမှူး ဦးမျိုးမြင့်မှ တရားလိုလုပ်ကာ
ဧပြီ ၂၆ရက်က တရားစွဲဆိုခဲ့ကြောင်း DVB မှ ကိုသန်းထိုက်အောင် က ပြောသည်။
နောက်တော့ ရဲကလိုက်ပါဆောင်ရွက်ရတယ် အရေးယူဆောင်ရွက်ရတယ်။ ရဲနဲ့ပြည်သူကိုအဆင်မပြေအောင်လုပ်တဲ့ဥပဒေမျိုးကို
ကျွန်တော်တို့အလိုမရှိဘူး၊မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကသူကဘေးကနေ ကြည့်နေတယ်။ဒါကြောင့်(ပုဒ်မ ၁၈ ကိုဖျက်သိမ်းစေချင်တယ်)” ဟု
DVB မှ ကိုသန်းထိုက်အောင်ကပြောသည်။
၎င်းဖြစ်စဉ်မှ ဧပြီ ၂၅ရက်က ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ပြည်မြို့တွင် သတင်းထောက် ၂၀ ဝန်းကျင်နှင့် ပြည်သူအင်အား ၈၀ ဝန်းကျင်ဖြင့်
DVB သတင်းထောက် ကိုဇော်ဖေအား ပြန်လည်လွတ်ပေးရန်အတွက် မဇ္ဈိမသတင်းထောက် ကိုရေခဲမှ ဦးဆောင်ဆန္ဒပြခဲ့ရာ ဧပြီ ၂၆ရက်တွင်
ပြည်မြို့ မြို့မစခန်းမှူး ဦးမျိုးမြင့်သည် ပနံပါတ် ၂၂၁/၁၄ ပုဒ်မ ၁၈ဖြင့် တရားလိုလုပ်ကာ တရားစွဲဆိုခဲ့သောကြောင့် မဇ္ဈိမသတင်းထောက်
ကိုရေခဲနှင့် DVBသတင်းထောက် ကိုသန်းထိုက်အောင်တို့သည် ယနေ့ မနက် ၁၀ နာရီတိတိအချိန်၌ မြို့မရဲစခန်းကိုသွားရောက်
အဖမ်းခံခဲ့သော်လည်း မြို့မစခန်းမှ ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ခံဝန်ကတိလက်မှတ်ထိုးခိုင်းကာ ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ ကြောင်း၎င်းကပြောသည်။
ပြည်မြို့နယ်တွင် ပြီးခဲ့သည့်လက ခရိုင်လယ်သမားများသပိတ်မှောက် ဆန္ဒပြခဲ့ရာ ပုဒ်မ ၁၈ ဖြင့်တရားစွဲခဲ့ပြီး ကိုဇော်ဖေအား ဖမ်းဆီးခြင်းနှင့်
ပတ်သက်၍ ကိုဝင်းလှိုင်ကလည်း တစ်ကိုယ်တော်ဆန္ဒပြခဲ့ရာ ပုဒ်မ ၁၈ဖြင့်ပင် ထပ်မံ တရားစွဲဆိုခဲ့သလို လက်ပံတောင်းတောင်ကိစ္စအား
ကိုကျော်ဆွေမှ တစ်ကိုယ်တော်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့စဉ် ယင်းပုဒ်မဖြင့်ပင် ထပ်မံတရားစွဲခဲ့သောကြောင့် ပုဒ်မ ၁၈ ဖြင့် တရားစွဲဆိုမှုပေါင်း ၂၀
ဝန်းကျင်ရှိပြီး၊ ယခု မဇ္ဈိမသတင်းထောက် ကိုရေခဲအား ပုဒ်မ ၁၈ ဖြင့် တရားစွဲဆိုခြင်းသည် ၂၁ မှုမြောက်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
DVB Debate : ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ပြောင်းလဲလာခြင်းကို ထိမ်းသိမ်းသင့်လား
4/13/2014 02:15:00 PM Myanmar-news
Dvb Debate:Should we control culture shift? (Part A)
"MTV မှာနှုတ်ခမ်းချင်းနမ်းရှုတ်တဲ့ ဇတ်ဝင်ခန်းထည့်ရိုက်တာ ကျွန်တော့်ခံစားမှုနဲ့ကျွန်တော်လုပ်တာ၊ ယဉ်ကျေးမှုကိုထိခိုက်စေလိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်မပါဘူး"
Dvb Debate:Should we control culture shift? (Part B)
“ယဉ်ကျေးမှုအရွေ့ကို အဆိုးဘက်ကမြင်ပါတယ်..ဘာလို့လဲဆိုတော့ တချို့စကားလုံးတွေကအနက်အဓိပ္ပါယ်တွေရှိပြီးသားကို တလွဲသုံးနေ
Dvb Debate:Should we control culture shift? (Part C)
“ယုံကြည်မှုမရှိလို့ပါ..သူတို့အနုပညာအပေါ် သူတို့ယုံကြည်မှုမရှိလို့ သူတို့ဒါမျိုးလုပ်တာပါ”
DVB သတင်းထောက် ကိုဇော်ဖေ (ခ) သူရသက်တင် မတရားဖမ်းဆီး ထောင်ချခံရခြင်းအတွက် နယ်စည်းမခြား သတင်းထောက်များအဖွဲ့(RSF)က ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ကန့်ကွက်
4/12/2014 11:15:00 AM Myanmar-news
DVB သတင်းထောက် ကိုဇော်ဖေ (ခ) သူရသက်တင် မတရားဖမ်းဆီး ထောင်ချခံရခြင်းအတွက် နယ်စည်းမခြား သတင်းထောက်များအဖွဲ့ (Reporters Without Borders) က သောကြာနေ့တွင် ၎င်းတို့၏ တရားဝင် အင်တာနက် စာမျက်နှာပေါ်၌ ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ကာ ကန့်ကွက်ခဲ့သည်။
"DVB သတင်းထောက် ကိုဇော်ဖေ(ခ) သူရသက်တင်အား ပိုင်နက်ကျူးလွန်မှု၊ ၀တ္တရားနှောင့်ယှက်မှုတို့ဖြင့် ဧပြီ ၇ ရက်တွင် မကွေးတရားရုံးက ထောင်ဒဏ်တစ်နှစ်ချမှတ် လိုက်ခြင်းအတွက် နယ်စည်းမခြား သတင်းထောက်များ အဖွဲ့အနေဖြင့် အလွန်အမင်း ထိတ်လန့်တုန်လှုပ် ရပါသည်" ဟု နယ်စည်းမခြား သတင်းထောက်များအဖွဲ့က ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် ကြေညာချက်တွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။
DVB သတင်းထောက် ကိုဇော်ဖေသည် ၂၀၁၂ခုနှစ် သြဂုတ်လအတွင်းက ကျောင်းသား မိဘတစ်ဦးနှင့်အတူ ဂျပန်နိုင်ငံအကူအညီဖြင့် ပေးအပ်သည့် ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေး အစီအစဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ ပညာရေး အရာရှိတစ်ဦးအား တွေ့ဆုံမေးမြန်း နိုင်ရန်အတွက် မကွေးခရိုင် ပညာရေးရုံးသို့ သွားရောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း အဆိုပါအရာရှိက ကိုဇော်ဖေနှင့် ကျောင်းသားမိဘအား ၀တ္တရားနှောင့်ယှက်မှု၊ ပိုင်နက်ကျူးလွန် မှုများနှင့် တရားစွဲဆိုခဲ့ပြီး ယခုအခါ ကိုဇော်ဖေနှင့် ကျောင်းသားမိဘ ကိုဝင်းမြင့်လှိုင်တို့ နှစ်ဦးသည် ထောင်ဒဏ်တစ်နှစ်စီ အပြစ်ပေးခံခဲ့ရသည်။
ထိုကဲ့သို့ မတရားဖမ်းဆီး ထောင်ချခံရခြင်းအတွက် DVB သတင်းစာက စီရင်ချက်အား ပြင်းထန်စွာဝေဖန်ခဲ့ပြီး ကိုဇော်ဖေသည် ဂျာနယ်လစ်တစ်ဦး အနေဖြင့် အများပြည်သူနှင့်ဆိုင်သည့် အကြောင်းအရာ တစ်ခုကို စုံစမ်းခဲ့ခြင်းသာ ဖြစ်သည်ဟု ပြောဆိုခဲ့ကြောင်း နယ်စည်းမခြား သတင်းထောက်များအဖွဲ့က ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် ကြေညာချက်တွင် ထည့်သွင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ ကိုဇော်ဖေဘက်မှ လိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သည့် ရှေ့နေဦးသိန်းထွန်းက ဖြစ်စဉ်နှင့် အမိန့်ချမှတ်မှုတွင် အချိန်ကြာမြင့် နေရခြင်းသည် တရားရုံး၏ ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် ဒေသဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်များက ၀င်ရောက်စွက်ဖက် နေခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပြီး ကိုဇော်ဖေနှင့် ကိုဝင်းမြင့်လှိုင်တို့ နှစ်ဦးအား နမူနာပြအနေဖြင့် သင်ခန်းစာပေးလိုသည့် သဘောဖြစ်ကြောင်း နယ်စည်းမခြား သတင်းထောက်များ အဖွဲ့သို့ ပြောဆိုခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
"ဒီအရေးယူ အပြစ်ပေးမှုကြောင့် လွတ်လပ်စွာ သတင်းစီးဆင်းမှုအပေါ်ကို ထိပါးတာ တစ်ခုတည်းကိုပဲ ကျွန်တော်တို့ စိုးရိမ်နေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီအရေးယူမှုက ဖော်ပြလိုက်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာ တကယ်ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ အခြေအနေတွေကိုပါ စိုးရိမ်မိပါတယ်" ဟု နယ်စည်းမခြား သတင်းထောက်များအဖွဲ့ အာရှ-ပစိဖိတ် အကြီးအကဲ ဘန်ဂျမင်အစ္စမေးလ်က ပြောဆိုခဲ့သည်။
"ဒေသဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့ သတင်းထောက် တစ်ယောက်ရဲ့ အလုပ်ကို တားဆီးပိုင်ခွင့်ရှိနေပြီး သူတို့ကို နှောင့်ယှက်တယ်လို့ ထင်မြင်ယူဆတာလေး တစ်ခုနဲ့ သတင်းထောက်တစ်ယောက်ကို ထောင်ချတယ်ဆိုတာ ဘယ်လိုမှ လက်သင့်ခံနိုင်စရာ အကြောင်းမရှိပါဘူး။ အဲဒီအတွက် ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ကိုဇော်ဖေကို လွှတ်ပေးဖို့အတွက် ဒေသဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်တွေကို တောင်းဆိုပါတယ်။ ပြီးတော့ အစိုးရ အနေနဲ့လည်း ရန်ကုန်နဲ့ အခြားနေရာတွေရယ်လို့ ကွဲမနေစေဘဲ နေရာတိုင်းမှာ တန်းတူညီမျှ သတင်းလွတ်လပ်ခွင့် ရရှိနိုင်ရေးအတွက် လုပ်ဆောင်ပေးဖို့ ကျွန်တော်တို့ တောင်းဆိုပါတယ်" ဟု သောကြာနေ့က ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် ကြေညာချက်တွင် ၎င်းကဆက်လက် ပြောဆိုခဲ့သည်။
နယ်စည်းမခြား သတင်းထောက်များ အဖွဲ့က ၂၀၁၄ ခုနှစ်အတွက် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် သတင်းလွတ်လပ်ခွင့် အဆင့်အတန်းတွင် နိုင်ငံပေါင်း ၁၈၀ ရှိသည့်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံကအဆင့် ၁၄၅ ရရှိခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
7/25/2014 09:31:00 AM Myanmar-news
အာဇာနည်နေ့က လုံခြုံရေးကဒ်မပါ၍ စစ်ဆေးမေးမြန်းခဲ့သော ကြက်ခြေနီတပ်ဖွဲ့တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည့် ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် ဝေဠကျော်အား DVB သတင်းထောက် လေးလေးမွန်မှ ၄င်း၏ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာပေါ်တွင် ရုန့်ရင်းကြမ်းတမ်းစွာ ဆဲဆိုခဲ့မှုကြောင့် ပြည်သူအများက ပြစ်တင်ဝေဖန်ခဲ့ကြပြီး ယခုအခါ ၄င်း၏ သတင်းဌာနဖြစ်သော
5/04/2014 09:04:00 PM political-news
DVB - အိန္ဒိယ ရထား၂စင်းတိုက် လူ၄၀သေဆုံး ၁၅၀ကျော်ဒဏ်ရာရ (ရုပ်သံ)
5/27/2014 06:58:00 AM world-news
အိန္ဒိယ နိုင်ငံ လူနေ အသိပ်သည်းဆုံး ပြည်နယ်ဖြစ်တဲ့ ဥထြာပရာဒတ် ပြည်နယ်ထဲမှာ ခရီးသည်တင် ရထားတစင်းနဲ့ ကုန်တင်ရထားတစင်း ၀င်တိုက်မိမှုဖြစ်တဲ့ မတော်တဆမှုအတွင်း လူ ၄၀ သေဆုံးပြီး ၁၅၀ ကျော် ဒဏ်ရာရတယ်လို့ ရဲအဖွဲ့နဲ့ ရထားအရာရှိတွေက ပြောပါတယ်။ DVB TV - 26.05.2014
သတင်းသွားမေးသော DVB သတင်းထောက်အား ပိုင်နက်ကျူးလွန်မှု၊ ၀တ္တရားနှောင့်ယှက်မှုများဖြင့် မကွေးမြို့နယ်တရားရုံးက ထောင်ဒဏ်တစ်နှစ်ချမှတ်၊ ယခုကဲ့သို့ အမိန့်ချမှတ်ခဲ့ခြင်းသည် သတင်းမီဒီယာဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် ကိုက်ညီခြင်းမရှိ
4/08/2014 04:12:00 PM political-news
ဧပြီ ၇ ရက်တွင် ထောင်ဒဏ်တစ်နှစ်စီ ချမှတ်ခြင်းခံခဲ့ရသည့် ဒီဗွီဘီသတင်းထောက် ဦးသူရသက်တင်နှင့် ကျောင်းသားမိဘ ဦးဝင်းမြင့်လှိုင်တို့ကို တွေ့ရစဉ်
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ပညာရေးမှူးရုံးက ပိုင်နက်ကျူးလွန်မှု၊ တာဝန်ဝတ္တရားနှောင့်ယှက်မှုနှင့် အားပေးကူညီမှုတို့ဖြင့် တရားစွဲဆိုထားသော ဒီဗွီဘီသတင်းထောက် ဦးသူရသက်တင် (ခ) ဦးဇော်ဖေနှင့် ကျောင်းသားမိဘ ဦးဝင်းမြင့်လှိုင်တို့အား ထောင်ဒဏ်တစ်နှစ်စီကျခံရန် မကွေးမြို့နယ်တရားရုံးက ဧပြီ ၇ ရက်က အမိန့်ချမှတ်ခဲ့သည်။
ဒီဗွီဘီသတင်းထောက် ကိုသူရသက်တင်နှင့် ကျောင်းသားမိဘ ဦးဝင်းမြင့်လှိုင်တို့အား ရာဇသတ်ကြီးဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၅၃ အရ ထောင်ဒဏ်တစ်နှစ်၊ ပုဒ်မ ၄၄၈ အရ ထောင်ဒဏ်တစ်နှစ်၊ အဆိုပါပြစ်ဒဏ်များအား တစ်နှစ်တပေါင်းတည်းကျခံရန် အမိန့်ချမှတ်ခဲ့သည်ဟု ကိုသူရသက်တင်၏ ရှေ့နေဖြစ်သူဦးသိန်းထွန်းက ပြောကြားသည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် သြဂုတ် ၂၄ ရက်က ကျောင်းသားမိဘနှင့်အတူ ဒီဗွီဘီသတင်းထောက်တို့သည် ဂျပန်နိုင်ငံသို့ KIZUNA ပရောဂျက်ဖြင့် လေ့လာရေးစေလွှတ်မည့် ကျောင်းသားကျောင်းသူများ၏ အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်များအား ပညာရေးမှူးရုံးသို့ သွားရောက်မေးမြန်းမှုနှင့်ပတ်သက်၍ တရားစွဲဆိုခံခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် သြဂုတ် ၂၅ ရက်က မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ပညာရေးမှူးရုံး လက်ထောက်ပညာရေးမှူး ဦးမောင်ငွေက တရားလိုပြုလုပ်၍ ၎င်းတို့အား တရားစွဲဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ၂၀၁၄ ခုနှစ် မတ် ၂၆ ရက်က တရားစွဲဆိုခံရသူနှစ်ဦး၏ နောက်ဆုံးလျှောက်လဲချက်အား ကြားနာခဲ့ကာ ယခုကဲ့သို့ အမိန့်ချမှတ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
အမှုစစ်ဆေးချိန်အတွင်း စွဲချက်ချသည့်အမိန့်ကို ဗဟိုတရားရုံးချုပ်အဆင့်အထိ အယူခံဝင်ခဲ့သော်လည်း ပလပ်ခြင်းခံခဲ့ရကြောင်း သိရသည်။
"ကျွန်တော့်အနေနဲ့ကတော့ ကျွန်တော့်အမှုသည်မှာ အပြစ်မရှိဘူးလို့ မြင်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ခရိုင်၊ တိုင်းအဆင့်ကနေ ဗဟိုအဆင့်အထိ ဆက်လက်အယူခံဝင်သွားမှာပါ" ဟု ရှေ့နေဦးသိန်းထွန်းက ပြောကြားသည်။
ဧပြီ ၇ ရက်တွင် ထောင်ဒဏ်တစ်နှစ်စီ ချမှတ်ခြင်းခံခဲ့ရသည့် DVB သတင်းထောက် ဦးသူရသက်တင်နှင့် ကျောင်းသားမိဘ ဦးဝင်းမြင့်လှိုင်တို့အား တွေ့ရစဉ်
ထိုသို့အမိန့်ချမှတ်ခဲ့မှုအပေါ် ဒီဗွီဘီသတင်းထောက် ဦးသူရသက်တင်က "ကျွန်တော် သတင်းထောက်တစ်ယောက်အနေနဲ့ လုပ်စရာရှိတာ လုပ်ခဲ့တာပါ။ အခုလိုတရားစွဲဆိုပြီး ထောင်ချခဲ့တာဟာ တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှုမရှိဘူးလို့ ပြောချင်ပါတယ်။ ဒါဟာမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့် ဘယ်လောက်ရှိတယ် သမ္မတဦးသိန်းစိန်ရဲ့ ဒီမိုကရေစီဖော်ဆောင်မှု ဘယ်လောက်ရောက်နေပြီလဲဆိုတာကို ဖော်ပြလိုက်တာပါပဲ။
ကျွန်တော့်အနေနဲ့ကတော့ အမှုဖြစ်စဉ်တစ်လျှောက်လုံးကို ဥပဒေနဲ့အညီပဲ ရင်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်။ တရားရေးမဏ္ဍိုင်ဟာ အုပ်ချုပ်ရေးမဏ္ဍိုင်ရဲ့ အောက်မှာရှိနေလား၊ သီးခြားလွတ်လပ်စွာရှိနေလားဆိုတာ ကျွန်တော့်ကိုချမှတ်တဲ့အမိန့်က ပေါ်လွင်သွားပါပြီ။ ဒီဖြစ်စဉ်ကိုလည်း ပြည်သူလူထုကိုအပ်ပါတယ်။ လူထုကမှားတယ်လို့ ဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုရင် ဒီသတင်းလောကကနေ အပြီးသတ်ထွက်သွားလိုက်ပါမယ်" ဟုပြောကြားသည်။
ကျောင်းသားမိဘဖြစ်သူ ဦးဝင်းမြင့်လှိုင်ကလည်း "အခုလိုထောင်ချမှတ်ခဲ့တဲ့အတွက် ဌာနဆိုင်ရာတွေနဲ့ ပတ်သက်လာရင် ပြည်သူလူထုဟာ အကြောက်တရားနဲ့ နေနေတော့မှာပါ" ဟုပြောကြားသည်။
ထိုသို့အမိန့်ချမှတ်ခဲ့ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အမိန့်ချမှတ်ပြီးသည့်အချိန်တွင် The Daily Eleven အနေဖြင့် မြို့နယ်တရားသူကြီး ဒေါ်မန်ဟောက်နျန်ထံသို့ ရုံးစာရေးမှတစ်ဆင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခွင့် တောင်းဆိုခဲ့ရာတွင် တွေ့ဆုံရန်ငြင်းပယ်ခဲ့သည်။
ထို့အပြင် မြို့နယ်တရားသူကြီး ဒေါ်မန်ဟောက်နျန်အနေဖြင့် စီရင်ချက်အမိန့်ဖတ်ကြားရာတွင် ခေါင်းငုံ့ကာဖတ်ကြားပြီး အသံတိုးလွန်းသဖြင့် မည်သည့်အတွက်ကြောင့် ထောင်ဒဏ်မည်မျှချမှတ်သည်ကို ကောင်းစွာကြားသိခဲ့ရခြင်းမရှိကြောင်း တရားခံနှစ်ဦးနှင့် ၎င်းတို့၏ ရှေ့နေအပါအ၀င် တရားခွင်အတွင်း ၀င်ရောက်နားထောင်သူများက ပြောကြားသည်။
ယခုကဲ့သို့ သတင်းထောက်နှင့် ကျောင်းသားမိဘအပေါ် ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့ခြင်းသည် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ၀န်ကြီးချုပ် ဦးဘုန်းမော်ရွှေ၏ အမိန့်အာဏာသက်ရောက်မှု မကင်းနိုင်ကြောင်း ဒေသခံသတင်းထောက်များက သုံးသပ်ပြောကြားသည်။
၎င်း၏လက်ထက်တွင် သတင်းမီဒီယာသမားများအား ဖမ်းဆီးမှုများရှိခဲ့ပြီး Eleven Media Group မှ မကွေးမြို့ခံ သတင်းထောက်နှစ်ဦးအား သတင်းဓာတ်ပုံနှင့်ဆက်စပ်ပြီး ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခဲ့ဖူးသည်။ မကြာသေးမီကလည်း မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ပေါက်မြို့နယ်မှ လက်နက်စက်ရုံ သတင်းဖော်ပြခဲ့မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး ယူနတီသတင်းဂျာနယ်၏ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်နှင့် သတင်းထောက်လေးဦးမှာ ပခုက္ကူခရိုင်တရားရုံး၌ တရားရင်ဆိုင်နေရလျက်ရှိသည်။ အဆိုပါအမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး တရားလိုဖြစ်သူ ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးကျော်ကျော်ဦးက နိုင်ငံတော်သမ္မတ ရုံးညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးလှထွန်းလက်မှတ်ရေးထိုးလျက် ၎င်းအားတရားလိုအဖြစ် အမှုဖွင့်ဆောင်ရွက်သွားရန် တာဝန်ပေးသည့်စာကို လက်ခံရရှိခဲ့ပြီး ပေါက်မြို့မရဲစခန်း၌ စာဖြင့်ရေးသားပြီး အမှုဖွင့်တိုင်တန်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ထွက်ဆိုခဲ့သည်။
သမ္မတရုံးမှတာဝန်ပေးသည့် စာတွင် (၁) ၂၅-၁-၂၀၁၄ ရက်ထုတ် ယူနတီနိုင်ငံရေးနှင့် တိုင်းရင်းသားသတင်းဂျာနယ်တွင် "ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးဟောင်း၊ လက်ရှိကာချုပ်နှင့် တရုတ်ပညာရှင်တို့၏ ပေါက်မြို့နယ်ရှိ လျှို့ဝှက်ဓာတုလက်နက်စက်ရုံ" ခေါင်းစဉ်ပါဆောင်းပါး၌ မိမိနိုင်ငံအပေါ် အခြားကမ္ဘာ့နိုင်ငံများက အထင်အမြင်လွဲမှားစေနိုင်သည့် ကာကွယ်ရေး၊ လုံခြုံရေးနှင့်သက်ဆိုင်သော နိုင်ငံတော်လျှို့ဝှက်ချက်ဓာတ်ပုံများ ဆောင်းပါးအချက်အလက်များ ဖော်ပြထားသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ (၂) အဆိုပါအမှုကိစ္စတွင် ဥပဒေချိုးဖောက်ကြောင်း၊ သံသယရှိသူများအား ၁၉၂၃ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံ အစိုးရလျှို့ဝှက်ချက်အက်ဥပဒေအရ အရေးယူနိုင်ရန်အတွက် "ကြည်း ၂၈၂၉၉၊ ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီး ကျော်ကျော်ဦး၊ ဌာနမှူး၊ စစ်ဆေးရေးဌာန အမှတ် (၂၄) ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းစက်ရုံ" က တရားလိုအဖြစ် အမှုဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်သွားရန် နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏ လမ်းညွှန်ချက်အားပေးပို့ပါသည်ဟု ပါရှိသည်။
ဒီဗွီဘီသတင်းထောက် ကိုသူရသက်တင်သည် ယခင်အစိုးရလက်ထက် ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် မေလအတွင်းက နတ်မောက်မြို့နယ် သမုန်းပင်ကျေးရွာ၌ သောက်သုံးရေရှားပါးမှုသတင်းအတွက် ရုပ်သံရိုက်ကူးမှုနှင့် ပတ်သက်၍ လိုင်စင်မဲ့ဗီဒီယိုရိုက်ကူးမှုဖြင့် ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီး ထောင်ဒဏ်သုံးနှစ်ကျခံခဲ့ရကာ ၂၀၁၂ ခုနှစ်အတွင်းက ပြန်လည်လွတ်မြောက်ခဲ့သူလည်း ဖြစ်သည်။
"ကျွန်တော်တို့သတင်းထောက်ကို ထောင်ချလိုက်တဲ့နေရာမှာ ကိုးကားထားတဲ့ ပုဒ်မတွေက ပုဒ်မ ၃၅၃ ၀တ္တရားနှောင့်ယှက်မှုနဲ့ ပိုင်နက်ကျူးလွန်မှု ပုဒ်မ-၄၄၈ နဲ့ဖြစ်တယ်။ အဲ့ဒီနေရာမှာ ပုဒ်မ-၃၅၃ ၀တ္တရားနှောင့်ယှက်တယ်လို့ပြောတယ်။ ကျွန်တော်တို့သတင်းထောက်က အများပြည်သူနဲ့ဆိုင်တဲ့ရုံးမှာ အစိုးရ၀န်ထမ်းတစ်ယောက်ကို အများပြည်သူသိသင့်တဲ့ သတင်းအချက်အလက်ကိုသွားမေးတာ ၀တ္တရားနှောက်ယှက်မှု လုံးဝမဟုတ်ဘူးလို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ တာဝန်ဝတ္တရားနှောင့်ယှက်မှုဆိုတာ အကြမ်းဖက်မှု ခြိမ်းခြောက်မှု ဒါမျိုးတွေပါမှ အဲဒီပြစ်မှုမြောက်တယ်။ အခုကျွန်တော်တို့ သတင်းထောက်က ကင်မရာပဲပါတယ်။ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းရိုက်တာပဲရှိတယ်။ ပြီးတော့ သတင်းမေးတာပဲရှိတယ်။ ဒါဟာဝတ္တရားနှောက်ယှက်မှုမြောက်လောက်တဲ့ ပြစ်မှုမဟုတ်ဘူးလို့ ကျွန်တော်တို့ မြင်ပါတယ်။ နောက်ပုဒ်မတစ်ခုက ပုဒ်မ ၄၄၈၊ အဲဒီပုဒ်မက ပိုင်နက်ကျူးလွန်မှု။ ပုဒ်မ ၄၄၈ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြစ်မှုမြောက်မမြောက်ကို ကျွန်တော်တို့ရှေ့နေနဲ့ တိုင်ပင်ကြည့်ပါတယ်။ အဲဒါက ပုဂ္ဂလိကပိုင်ဆိုင်မှုတွေထဲကို ကျူးကျော်ဝင်ရောက်တဲ့ ပြစ်မှုဖြစ်ပါတယ်။
ခုဟာက အများပြည်သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ ရုံးထဲကို ရုံးချိန်အတွင်းမှာ သတင်းထောက်က ၀င်ရောက်သတင်းမေးမြန်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဟာကလည်း ပိုင်နက်ကျူးလွန်မှုမမြောက်ဘူးလို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
အစိုးရသစ်လက်ထက်မှာ ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်နေတယ်။ ပြီးတော့ သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ကို ပေးတယ်လို့ပြောတယ်။ အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ တိုးတက်မှုရှိတယ်လို့ ကျွန်တော်တို့အသိအမှတ်ပြုပါတယ်။ သို့သော် ခေတ်မမီတော့တဲ့ ရာဇသတ်ကြီးဥပဒေတွေ၊ ကျင့်ထုံးဥပဒေတွေကိုအသုံးချပြီး သတင်းမီဒီယာလောကသားတွေကို ဖိနှိပ်ပြီး အရေးယူနေတာကတော့ သူတို့ပြောနေတဲ့ သွားနေတဲ့ နိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုနဲ့ လုံးဝဆန့်ကျင်နေတယ်ဆိုတာကိုတော့ ကျွန်တော်တို့ ထောက်ပြပါတယ်" ဟု ဒီဗွီဘီသတင်းဌာန၏ အမှုဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးခင်မောင်ဝင်းက ပြောကြားသည်။
ဒီဗွီဘီသတင်းထောက် ကိုသူရသက်တင်သည် အသက် ၄၁ နှစ်အရွယ်ရှိပြီး မကွေးမြို့ ကန်သာရပ်တွင် နေထိုင်ကာ ဇနီးနှင့် အသက်နှစ်နှစ်အရွယ် သားတစ်ဦးရှိကြောင်း သိရသည်။
ယခုကဲ့သို့၎င်းအား ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့ခြင်းသည် မကြာသေးမီက ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သော သတင်းမီဒီယာဥပဒေနှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိကြောင်းလည်း ပြောဆိုမှုများရှိနေသည်။
ပြီးခဲ့သော မတ် ၁၄ ရက်က ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှ အတည်ပြုခဲ့သည့် သတင်းမီဒီယာဥပဒေတွင် နစ်နာသောဌာန၊ အဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်သည် သတင်းမီဒီယာသမားတစ်ဦးက ပုဒ်မ ၉ တွင် ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် တာဝန်နှင့်ကျင့်ဝတ် သိက္ခာတစ်ရပ်ရပ်ကို ချိုးဖောက်ကြောင်းယူဆလျှင် ရှေးဦးစွာ ကောင်စီသို့ တိုင်ကြားနိုင်ကြောင်း သတင်းမီဒီယာဥပဒေပုဒ်မ ၂၁ တွင် ပြဋ္ဌာန်းထားပြီး ကောင်စီ၏ရှေ့မှောက်တွင် ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းရာ၌ ပြေလည်မှုမရှိပါက တိုင်ကြားသူ သို့မဟုတ် ကျေနပ်မှုမရှိသူသည် သက်ဆိုင်ရာတရားရုံးတွင် ဥပဒေနှင့်အညီ တရားစွဲဆိုနိုင်ကြောင်း သတင်းမီဒီယာဥပဒေပုဒ်မ ၂၃ တွင် ပြဋ္ဌာန်းထားသည်ကို တွေ့ရသည်။
"သတင်းမီဒီယာဥပဒေမှာက သတင်းမီဒီယာသမားတစ်ဦးက တာဝန်နဲ့ကျင့်ဝတ်သိက္ခာ တစ်ရပ်ရပ်ကို ချိုးဖောက်ရင် ရှေးဦးစွာ သတင်းမီဒီယာကောင်စီကို တိုင်ကြားနိုင်တယ်လို့ ပြဋ္ဌာန်းထားတယ်။ ဥပဒေအရ ဖွဲ့စည်းတဲ့ သတင်းမီဒီယာကောင်စီကို မဖွဲ့ရသေးဘူးဆိုပေမယ့် လက်ရှိမှာဖွဲ့စည်းထားတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံစာနယ်ဇင်းကောင်စီ (ယာယီ)ဆိုတာ ရှိပါတယ်။ ကောင်စီရှေ့မှောက်မှာ ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းရာမှာ ပြေလည်မှုမရှိရင်တော့ ဥပဒေနဲ့အညီ တရားစွဲဆိုနိုင်တယ်လို့ ပြဋ္ဌာန်းထားတယ်။ ဒီဖြစ်စဉ်မှာ သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကသာ မီဒီယာတွေကို မဖိနှိပ်ချင်ဘူး။ မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်ကို အသိအမှတ်ပြုချင်တယ်ဆိုရင် ဒီဥပဒေအရကောင်စီမှာ အရင်ညှိနှိုင်းသင့်တယ်။ ကောင်စီကိုလည်း အသိမပေး။ ညှိလည်းမညှိနှိုင်းဘဲ ထောင်ဒဏ်အမိန့်ချမှတ်တာဟာ သတင်းမီဒီယာဥပဒေနဲ့ မကိုက်ညီသလို ဖြစ်နေပါတယ်" ဟု ဥပဒေပညာရှင်တစ်ဦးကဆိုသည်။
လက်ရှိသတင်းမီဒီယာဥပဒေကို ၂၀၁၄ ခုနှစ် မတ် ၁၄ ရက် (ယခု ဒီဗွီဘီသတင်းထောက်အား အမိန့်မချမီ) က ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ ခြင်းဖြစ်သောကြောင့် ဒီဗွီဘီသတင်းထောက်ဖြစ်စဉ်အား အမိန့်မချမီ သတင်းမီဒီယာဥပဒေကို ထည့်တွက်စဉ်းစားခြင်းမရှိသည်မှာ သတင်းမီဒီယာဥပဒေနှင့် မကိုက်ညီဘဲဖြစ်နေကြောင်း သတင်းမီဒီယာဥပဒေပြဋ္ဌာန်း ချက်များအရ သိရသည်။
"ဘာမဟုတ်တဲ့ကိစ္စ ထောင်မချသင့်တဲ့ကိစ္စကို ထောင်ချတယ်။ ဘာမှမကြီးကျယ်တဲ့ ပြစ်မှုတစ်ခုကို ထောင်တစ်နှစ်က ပြင်းလွန်းတယ်။ တိုင်းပြည်တစ်ပြည်လုံးကို ရောင်းစားလာဘ်ပေးလာဘ်ယူကို အကြီးအကျယ် ကျူးလွန်တဲ့သူတွေကိုကျတော့ နယ်ပြောင်းရုံလောက် ရာထူးအနားပေးရုံလောက်နဲ့ တရားတောင်မစွဲဘူး။ အဲဒီတော့ လက်ရှိအခြေအနေကိုကြည့်ရင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ သတင်းမီဒီယာကို သွယ်ဝိုက်တဲ့နည်းနဲ့ချုပ်ကိုင်ဖို့ လုပ်တာတွေ ကြီးထွားလာတယ်။ ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာအားလုံးလိုလားတဲ့ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်ဖို့အတွက် မျှော်လင့်ချက်တွေ မှေးမိန်လာပြီဆိုတာ လူထုသဘောပေါက်ဖို့လိုပါတယ်။
အစိုးရကို ပြင်းပြင်းထန်ထန်တောင်းဆိုဖို့ နိုင်ငံတကာအသိုင်းအ၀ိုင်းကိုလည်း တိုက်တွန်းရမယ်။ အစိုးရရဲ့ ဒီမိုကရေစီအပြောင်းအလဲနဲ့ ဒီမိုကရေစီစံနှုန်းတွေအတွက် ဖိအားပေးဖို့ နိုင်ငံတကာအသိုင်းအ၀ိုင်းနဲ့ ပြည်သူတွေအနေနဲ့ ဘယ်လိုဖိအားပေးမလဲဆိုတာ စဉ်းစားသင့်ပြီ" ဟု Eleven Media Group ၏ CEO ဒေါက်တာသန်းထွဋ်အောင်က ပြောကြားခဲ့သည်။
ယခုကဲ့သို့ ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ လာမည့်သောကြာနေ့(၁၁-၄- ၂၀၁၄) နေ့တွင် Eleven Media Group မှ ထုတ်ဝေမည့် The Daily Eleven သတင်းစာနှင့် Premier Eleven Sports ဂျာနယ်မျက်နှာဖုံးများတွင် Black Cover အဖြစ်ပြုလုပ်၍ ကန့်ကွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
DVB သတင်းထောက်အား ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့ခြင်းအပေါ်အမြင်များ
"ဒါလုံးဝမတရားပါဘူး။ သတင်းမေးရုံနဲ့ ၀တ္တရားနှောင့်ယှက်မှုမဖြစ်ပါဘူး။ အမှန်ကတော့ တရားစီရင်တဲ့ သဘောကပဲကြည့်ကြည့် အုပ်ချုပ်ရေးသဘောကပဲကြည့်ကြည့် သူကတကယ်ပဲ သတင်းလိုချင်တယ်။ လိုချင်ရတာကလည်း သူ့အတွက်မဟုတ်ဘူး။ တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးကို တင်ပြချင်တဲ့သတင်းထောက်။ ထောင်ကိုမချသင့်ပါဘူး။ အဲဒီလိုမျိုးလုပ်လိုက်တာက မီဒီယာကို နှိပ်ကွပ်တဲ့သဘောရောက်ပါတယ်။ ရှင်းရှင်းပြောရရင် နောက်မလုပ်ရဲအောင် လုပ်လိုက်တာပါပဲ။ ဆိုလိုတာက မိဘကသားသမီးကို နောက်မလုပ်ရဲအောင် လုပ်တာကတစ်မျိုး၊ ဆရာကကျောင်းသားကို နောက်နောင်မလုပ်ရဲအောင် သင်ခန်းစာပေး ဆုံးမတာက တစ်မျိုးပေါ့ဗျာ။ သတင်းထောက်ဆိုတာက ပြည်သူရဲ့သားသမီးဗျ။ သတင်းထောက်ကို အဲဒီလိုမလုပ်သင့်ပါဘူး"
"အစိုးရသစ်တက်ပြီး ဒုတိယအကြိမ်လွှတ်တော်ကတည်းက ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်။ သတင်းမီဒီယာတွေကို ကာကွယ်မယ့် ဥပဒေတို့၊ ဖိနှိပ်တဲ့ဥပဒေတွေကို ပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေတို့ လုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုပါ။ အဲဒီနှစ်ခုကိုမလုပ်ရင် အယ်ဒီတာချုပ်တွေအပါအ၀င် သတင်းထောက်တွေဟာ စာရေးစားပွဲကနေ အင်းစိန်အကျဉ်းထောင်ထဲ အချိန်မရွေးရောက်နိုင်တယ်လို့လည်း ပြောခဲ့ပါတယ်။ အခုသတင်းမီဒီယာဥပဒေကို ထုတ်ပြန်ပြီး နည်းဥပဒေရေးဆွဲနေတဲ့အချိန်မှာ မီဒီယာသမားတွေကိုထောင်ချမယ့် ကိစ္စတွေကို စာနယ်ဇင်းကောင်စီနဲ့ ညှိနှိုင်းသင့်ပါတယ်။ အခုလို မီဒီယာသမားတွေကို ထောင်ချပြီး အရေးယူဖြေရှင်းနေတယ်ဆိုတာ အခုလို ဒီမိုကရေစီကူးပြောင်းနေတဲ့အချိန်မှာ စတုတ္ထမဏ္ဍိုင်အရေးကြီးတယ်လို့ ပြောနေကြတဲ့အချိန်မှာ အင်မတန် ရုပ်ဆိုးအကျည်းတန်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်လို့ ပြောပါရစေ"
"တကယ်တမ်းပြောရရင် ပုဒ်မတွေက နဂိုကတည်းက ရေးထားပြီးသား။ ဘယ်ဟာက ထောင်ဒဏ်ခြောက်လ၊ ဘယ်ဟာက ထောင်ဒဏ်တစ်နှစ်ဆိုတာ သတ်မှတ်ပြီးသား။ အဲဒါကိုနည်းတယ်။ များတယ်လို့တော့ ပြောလို့မရဘူး။ ဖြစ်ပြီဆိုရင် စာနယ်ဇင်းကောင်စီ၊ ပြန်ကြားရေးကော်မတီတို့နဲ့ ဆွေးနွေးမှုတွေ ပြုလုပ်စေချင်တယ်။ အဲဒီလိုလုပ်လိုက်ရင် တရားစွဲတာတွေ သိပ်မရှိတော့ဘူး။ အခုနောက်ပိုင်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင် သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်၊ ရဲတွေနဲ့အမှုဆင်ပြီးတော့ ချက်ချင်းအရေးယူဖြစ်တယ်။ အဲဒီလိုပြဿ နာတွေက နိုင်ငံတိုင်းမှာရှိတယ်။ သတင်းထောက်တွေမှာ စွန့်စားရတာတွေ၊ အန္တရာယ်ရှိတာတွေက ရှိပြီးသား။ ဥပဒေထဲမှာ ထည့်ရေးထားတာရှိတယ်။ သတင်းထောက်ကခွင့်တောင်းပြီး မေးတယ်ဆိုရင် ဖြေဖို့တာဝန်ရှိတယ်။ မဖြေဘူးဆိုရင် သက်ဆိုင်ရာဌာနကနေ အရေးယူဖို့ပါတယ်။ အဲဒါတွေက မလာသေးတဲ့အတွက် ထစ်ကနဲရှိရင် သတင်းထောက်ကို အနီးကပ်ဆုံးဥပဒေနဲ့ဖမ်းတာ၊ ထောင်ချတာတွေလုပ်နေတယ်။ ပြစ်ဒဏ်များတယ်၊ နည်းတယ်ဆိုတာကိုတော့ မပြောချင်ဘူး အဲဒီကိစ္စတွေက ဖြစ်ကိုမဖြစ်သင့်တဲ့ကိစ္စတွေ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ပြေလည်အောင် ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်သင့်တဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်"
"ဒါဟာ သတင်းထောက်တွေကိုဖိနှိပ်တာဘဲ။ ကျန်တဲ့သတင်းထောက်တွေကို အဲဒီလိုမလုပ်ရဲအောင်လုပ်တာဘဲ။ ဒါဟန့်တားတာဘဲ။ သတင်းမီဒီယာသမားတွေကို အဲဒီလိုထောင်ချလိုက်တာကို ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ လက်မခံပါဘူး။ သတင်းထောက်တွေကို ဖမ်းဆီးထောင်ချလိုက်တာဟာ ကောင်းတဲ့လက္ခဏာမဟုတ်ပါဘူး။ အလားအလာမကောင်းပါဘူး။ သတင်းမီဒီယာသမားတွေအနေနဲ့ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့ လိုအပ်လာပြီ။ တရာဥပဒေစိုးမိုးမှုကလည်း ပုံမှန်အခြေအနေမဟုတ်ပါဘူး။ ဖိနှိပ်တာတွေ၊ မတရားတာတွေကလည်း အများကြီးပါ။ ကျွန်တော်တို့တင်မဟုတ်ပါဘူး။ အောက်ခြေပြည်သူတွေလည်း အများကြီးခံနေကြရပါတယ်"
သတင်းမီဒီယာတွေကို တရားစွဲတာ ထောင်ဒဏ်ချမှတ်တာတွေက ရှိနေဦးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ လူတွေသိပ်မသိကြလို့ပါ။ အရင်တုန်းကလည်း ရှိခဲ့ပါတယ်။ အခုလည်းဆက်ရှိနေဦးမှာပါပဲ။ သတင်းထောက်ကလည်း သတင်းထောက်အခွင့်အရေးအရ လွတ်လပ်ခွင့်အရဆိုပြီး သတင်းရယူသလို တရားစွဲအဖွဲ့အစည်းကလည်း သူတို့အခွင့်အရေးအရ တရားစွဲမှာပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ဝေဖန်ချင်စရာတစ်ခုကတော့ အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းနဲ့ သတင်းမီဒီယာနဲ့ ငြိလာရင်တော့ တရားရေးက အကာအကွယ်ပေးထားတဲ့သဘောမျိုးတွေ ရှိနေပါတယ်"
"တကယ်တော့ မီဒီယာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဖိနှိပ်မှုတွေ ဆက်တိုက်တွေ့နေရတယ်။ အရင်တုန်းက မီဒီယာနဲ့ပတ်သက်ပြီး အရေးယူတာတွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။ The Voice ၊ ဦးမြတ်ခိုင်တို့ကို တရားစွဲခဲ့တယ်။ အဲဒီအမှုတွေက ဖြေလျော့ပေးခဲ့တယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ အခု Eleven ကမခိုင်၊ Unity ကသတင်းထောက်တွေကို ဖိနှိပ်တဲ့ပုံစံနဲ့ ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။ လှိုင်သာယာမှာ ကျူးကျော်သူတွေ တော်တော်များများကို ဒီပုဒ်မနဲ့ဆွဲကြပါတယ်။ ထောင်ကျတယ်ဆိုတာ ရှားပါတယ်။ ပိုင်နက်ကျူးလွန်မှုဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ မီဒီယာကို ထောင်ချတယ်ဆိုတာ အံသြဖို့ကောင်းတယ်။ အခုလို မီဒီယာဖြေလျှော့မှုတွေ ပြုလုပ်ရမယ့်အချိန်မှာ ဖိနှိပ်တာဖြစ်နေတယ်။ ဒီအချက်ကို အုပ်ချုပ်ရေးအကြီးအကဲ၊ လွှတ်တော်အကြီးအကဲတွေနဲ့ တရားရေးအကြီးအကဲတွေ အလေးထားစဉ်းစားဖို့လိုပြီလို့ ပြောချင်ပါတယ်"
ဦးမြင့်ကျော် (မြန်မာဂျာနယ်လစ်ကွန်ရက် အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး)
"အခုချမှတ်လိုက်တဲ့ပြစ်ဒဏ်ကို ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ အရမ်းပြင်းထန်လွန်းတယ်။ အဓိပ္ပါယ်မရှိဘူး။ ဖြစ်တဲ့အဖြစ်အပျက်က ကျွန်တော်တို့ သေချာသိပြီးသား။ သူသတင်းမေးဖို့ ကြိုးစားတာမရတော့ ဗီဒီယိုခဏလေး ရိုက်လိုက်တယ်။ အဲဒီဗီဒီယိုက ဖော်ပြဖို့လည်းမဟုတ်ဘူး။ မှတ်တမ်းတင်တဲ့အနေနဲ့ ခဏလေးရိုက်လိုက်တာ။ တချို့ဒေသန္တရအစိုးရက သူတို့သြဇာအာဏာကို လိုတာထက်ပိုပြီးတော့သုံးချင်တယ် မီဒီယာကိုရော၊ လူတွေကိုရော အကြောက်တရားရအောင် လုပ်ချင်တယ်။ ဒီကိစ္စတော့ ဘယ်လို့မှမျှတတဲ့ဟာလည်းမဟုတ်ဘူး။ ဖြစ်သင့်ဖြစ်ထိုက်တဲ့ဟာလည်း မဟုတ်ဘူး"
" နိုင်ငံတော်ရဲ့ တရားစီရင်ရေးမူမှာလည်းရှိတယ်။ နိုင်ငံသားတွေကို အပြစ်ပေးရေးထက် ပြုပြင်ရေးကိုဦးတည်ပြီး ဆောင်ရွက်ရမယ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအခါမှာ သတင်းထောက်တွေဆိုတာ နိုင်ငံတော်ရဲ့ စတုတ္ထမဏ္ဍိုင်ကို အားပြုနေတဲ့သူတွေအပေါ်မှာ အခုလိုနှစ်ရှည်ပြစ်ဒဏ်တွေ ချမှတ်ခြင်းဟာ လုံးမဖြစ်သင့်တဲ့ကိစ္စလို့ အဓိကထားပြောချင်တယ်။ အားလုံးပြောပြောနေတဲ့ ငြိမ်းစုစီဥပဒေ၊ ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေမျိုးတွေကိုတောင် လွှတ်တော်မှာ ပြစ်ဒဏ်တွေလျော့ပေါ့ပေးခဲ့ပြီးပြီ။ ဒီအချိန်မှာ ဒီလိုပြစ်ဒဏ်ပေးမှုဟာ လုံးဝမမျှတဘူး။ ၀တ္တရားနှောက်ယှက်မှုဆိုတာ တကယ်တမ်းကျတော့ တရားရုံးပြင်ပမှာ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ကျေအေးလို့ရတယ်။ အဲဒါအပေါ်မှာ အာဏာပိုင်တွေနဲ့ တရားသူကြီးတွေရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်ဟာ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးမုန်းတီးမှု ဆောင်ရွက်ချက်တွေပါနေသလားလို့ မေးခွန်းထုတ်ရမယ်။ နိုင်ငံတည်ဆောက်နေတဲ့အချိန်မှာ အင်အားတစ်ချို့ကို ဖွင့်လှစ်ပေးပြီးမှ ပြန်လည်ဆုံးရှုံးမှုတွေ ဖြစ်နေတဲ့အပြင် နိုင်ငံတော်တစ်ခုလုံးသွားနေတဲ့ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးမူကိုလည်း လုံးဝထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။ တစ်နည်းအားဖြင့် ဒေသအလိုက်ခွဲပြောမယ်ဆိုရင် မကွေးတိုင်းဒေသမှာ ချမှတ်လိုက်တဲ့ပြစ်မှုက ဒါဟာအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းက တရားစီရင်ရေးပိုင်းကို လွှမ်းမိုးနေတယ်ဆိုတာ ထင်ရှားတယ်ဆိုတာ ပြလိုက်တာပါပဲ။ အခြေခံဥပဒေနဲ့ ညီညွတ်မှုမရှိဘူး။ အခြေခံဥပဒေကို ချိုးဖောက်နေတယ်။ အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင်တွေနဲ့ တရားစီရင်ရေးမဏ္ဍိုင်မှာပါဝင်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ချို့ရဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြုပြင်မှုတွေ အရမ်းလိုအပ်နေတယ်ဆိုတာ အထင်အရှားပြလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ သုံးသပ်ချင်ပါတယ်"
6/02/2014 08:22:00 AM celebrity-news Myanmar-news
မြန်မာအလှမယ် မေမြတ်နိုးဟာ Miss Asia Pacific World 2014 ဆုကို ရရှိသွားပါပြီ။ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာ ပြုလုပ်သွားတဲ့ ဒီပြိုင်ပွဲမှာ အသက်(၁၈)နှစ်အရွယ် မေမြတ်နိုးဟာ လူကြိုက်အများဆုံးဆုကိုလည်း ကနေဦးက ရရှိထားပြီး မေလ ၃၁ရက်နေ့ နောက်ဆုံးအဆင့်မှာ ကိုရီးယားအလှမယ်ကို ယှဉ်ပြိုင်အနိုင်ယူကာ Miss Asia Pacific အလှမယ်ဆုကို ဆွတ်ခူးသွားတာပါ။
အခုနောက်ပိုင်း မြန်မာအလှမယ်တွေ နိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲတွေ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်လာကြပြီး အများစုက အင်တာနက်မယ်ဆု၊ လူကြိုက်အများဆုံးဆု စတဲ့ မဲပေးစနစ်ဆုတွေ ရရှိခဲ့ကြချိန်မှာ မေမြတ်နိုးက ပထမဆုံးအကြိမ် နိုင်ငံတကာ အလှမယ် သရဖူ ဆွတ်ခူးနိုင်သူ ဖြစ်လာပါတယ်။
5/28/2014 09:24:00 PM Myanmar-news
5/02/2014 06:52:00 AM Myanmar-news weather-news
နာဂစ်မုန်တိုင်း မိဘမဲ့ကလေးငယ်များ ရုပ်သံမှတ်တမ်းကို ဒီဗီဘီမှာ မေလ ၂ ရက်နေ့ ထုတ်လွှင့်ပြသသွားမည်။
Orphans of the Storm wasadocumentary produced by Quicksilver Media. The film follows the plight of children orphaned by cyclone Nargis, the tropical storm that struck Burma in 2008. Filmed undercover by Democratic Voice of Burma [DVB] cameraman. Directed and Produced by Jeremy Williams & Evan Williams, edited by Paul Carlin, music Samuel Sim, executive producer Siobhan Sinnerton. The film won the One World Media Children's Rights Award in 2010, the Rory Peck Award in 2009 and was runner-up Best Documentary, Association of International Broadcaster awards in 2009.
DVB - မီဒီယာဥပဒေအတည်မဖြစ်ခင် ကာကွယ်မပေးနိုင်ကြောင်း ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးပြော
4/29/2014 12:33:00 PM political-news
မီဒီယာ ဥပဒေ အတည်မဖြစ်သေးခင် ဒီဗီဘီ ကုိုဇော်ဖေ တရားစွဲ ခံရတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဥပဒေအရ အကာအကွယ် မပေးနုိုင်တာ ဖြစ်တယ်လုို့ ပြန်ကြားရေး ၀န်ကြီး ဦးအောင်ကြည် ပြောပါတယ်။ ဦးမြင့်နုိုင်က သတင်းပေးပုို့ထားပါတယ်။
4/17/2014 08:42:00 PM Myanmar-news
DVB မှ ထောင်ဒဏ် (၁)ကျခံနေရသော မကွေးသတင်းထောက် ကိုဇော်ဖေ အပါအဝင် ထောင်ကျ ခံနေရသော သတင်းသမားများ ပြန်လည် လွတ်မြောက်ရန်အတွက် ဆုတောင်းပွဲကို ရန်ကုန်မြို့ ရွှေတိဂုံဘုရားအရှေ့ဘက်မုဒ် ကြေးသွန်းဘုရားတွင် ပြုလုပ်နေစဉ်။ (ဓာတ်ပုံ - ဟိန်ထက်) ဆုတောင်းပွဲ အပြီးတွင် ငါးလွှတ်ခြင်းနှင့် ငှက်လွှတ်ခြင်းတို့ ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။
4/11/2014 07:45:00 PM articles
4/02/2014 02:01:00 PM political-news
လက်ပံတောင်းတောင် စီမံကိန်းအတွင်းက လယ်တီသိမ်ကို ဖြိုဖျက်တဲ့ အပေါ် ဒေသခံတွေ ကန့် 
ကွက်နေကြပါတယ်။ ခွန်ဘသာ တင်ဆက်။ ရုိုက်ကူး အိုင်စီဂျေ သူရ။ DVB TV - 01.04.2014
4/01/2014 04:19:00 PM Myanmar-news thai-news